Football Khabar » इन्टर मिलान रेलिगेसन टिमसँग बराबरीमा रोकियो : युभेन्टसलाई फाइदा !
इन्टर मिलान रेलिगेसन टिमसँग बराबरीमा रोकियो : युभेन्टसलाई फाइदा !
इटालियन सिरी ए फुटबलमा उपाधि होडमा रहेको इन्टर मिलानलाई ठूलो धक्का लागेको छ । आइतबार राति भएको लिगको २०औं खेलमा इन्टर मिलानलाई लिकेले १–१ को बराबरीमा रोकिदियो । आफ्नो घरमा गोल खाएको लिकेले पछि गोल गर्दै बराबरी नतिजा निकालेको हो ।
निकै प्रतिस्पर्धात्मक खेलको पहिलो हाफमा दुवै टिमले गोल गर्न सकेनन् । तर, खेलको ७१औं मिनेटमा पाहुना टोली मिलानका लागि एलेसान्ड्रो बास्टोनीले गोल गर्दै घरेलु टोलीलाई पछि पारेका थिए ।
तर, मिलानको अग्रता धेरैबेर टिकेन । गोल खाएको ६ मिनेटमै लिकेका लागि मोर्का मानकोसुले गोल बक्स भित्रबाट क्रस पासमा सुन्दर गोल गरेपछि खेल १–१ मा आयो । त्यसपछि बाँकी समयमा दुवै टिमले गोल गर्न नसकेपछि खेल बराबरीमा टुंगियो ।
मिलान बराबरीमा रोकिँदा यसको सोझो फाइदा लिग लिडर युभेन्टसलाई पुगेको छ । यदि यो खेल जितेको भए मिलानले युभेन्टसलाई १ अंकले पछि पार्दै शीर्ष स्थानमा चढ्ने थियो । तर, बराबरीपछि मिलान २० खेलछि ४७ अंकसहित दोस्रो स्थानमै सीमित भएको छ । यदि आजै राति हुने आफ्नो खेलमा युभेन्टस विजयी भए उसले मिलानलाई ४ अंकले पछि छाड्नेछ, जुन उपाधि होडमा उसलाई ठूलो सहजता हुनेछ ।
यता, मिलानलाई आफ्नो घरमा बराबरीमा रोकेको लिके १६ अंक बनाएर १७औं स्थानमा चढेको छ । यसअघि ऊ रेलिगेसन जोनमा थियो ।
प्रकाशित मिति ५ माघ २०७६, आईतवार २१:५७